ပရီမီယမ် app တွေနဲ့ game တွေကို အကန့်သတ်မရှိ download ရယူလိုက်ပါ။
In-app items များအကုန်လုံး ပါဝင်ပြီးသား classic game များကို တစ်နှစ်စာဝန်ဆောင်မှုအတွက် အရစ်ကျ အပတ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းခြင်းဖြင့် စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်ပြီး အသုံးဝင်app များကိုလည်း ကြော်ငြာမပါဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
အခုပဲ appstore.telenor.com.mm ကိုသွားပြီး သင့်စိတ်ကြိုက် app တွေကို download ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
“Telenor App Store” ဆိုတာဘာလဲ?
“Telenor App Store” ဆိုသည်မှာ အခကြေးငွေဖြင့်ဝယ်ယူရသည့် premium apps နှင့် games များကို အပတ်စဉ် ပုံသေဝန်ဆောင်ခနည်းနည်းဖြင့် အကြိမ်ရေအကန့်အသတ်မရှိ download ပြုလုပ်နိုင်မည့် ဆန်းသစ်သည့် ၀န်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူထားရုံဖြင့် အကောင်းဆုံးသော Games, Kids, Tools, Health, Education, Photography အစရှိသော ကဏ္ဍများစွာမှ ရာနှင့်ချီသော apps များကို သင့်အနေဖြင့် အလိုရှိသလောက် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်စာဝန်ဆောင်မှုအတွက် အရစ်ကျ တစ်ပတ်စာ ဝန်ဆောင်ခ ၄၂၀ကျပ် (အခွန်ပါပြီး) ကို သင်၏ ဖုန်းဘေလ်ထဲမှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုအား ဆက်လက်အသုံးမပြုတော့ပါက download ပြုလုပ်ထားသော apps များအား ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
Appsများမှာ ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုရပ်တန့်လိုက်ပါက appsများအားအသုံးပြုနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင့်၏ အချက်အလက်များအား ၀န်ဆောင်မှုရပ်တန့်ပြီး ၂ လတိတိ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါအချိန်ကာလအတွင်း ၀န်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူရုံဖြင့် appsများအား ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Telenor App Store ဝန်ဆောင်မှုအား Opera Mini Browser တစ်မျိုးတည်းနှင့်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
Opera Browser အပြင်အခြား Browser များနှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အပ်ပလီကေးရှင်းများ အား အဆင်ပြေစွာ အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Opera Mini Browser အားအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါတယ်။ Chrome/ Google Browser ဖြင့်အသုံးပြုပါက အပ်ပလီကေးရှင်းများအား အဆင်ပြေစွာ အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် ‘Data Saver’ Mode အား (OFF) ပိတ်ပါရန် အကြံပြု ပါတယ်။
Telenor App Store ၀န်ဆောင်မှုရဲ့ အားသာချက်များ?
Telenor App Store ၀န်ဆောင်မှုကိုရယူလိုက်ရုံဖြင့် သင့်အနေနှင့် အကောင်းဆုံးသော apps တွေကို • ပုံသေဝန်ဆောင်ခနည်းနည်းဖြင့် အပို ၀န်ဆောင်ခကောက်ခံမှုမရှိခြင်း • In-apps ကြော်ငြာများမပါ၀င်ခြင်း • Inappropriate content များမပါ၀င်ခြင်း • In-app items များ သီးသန့်ထပ်မံဝယ်ယူရန်မလိုဘဲ gaming experience အားအပြည့်အဝရရှိနိုင်ခြင်း အစရှိသည့် အားသာချက်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Apps ဘယ်လောက်များများ download ပြုလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
သင့်အနေဖြင့် Apps များအား စိတ်ကြိုက် download အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Telenor App Store မှ download ပြုလုပ်ထားမှန်း မည်ကဲ့သို့သိရှိနိုင်မလဲ?
Telenor App Store မှ download ပြုလုပ်ထားသမျှ apps icon တိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်အသားလေးတွေ ပါရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အနေနှင့် တခြားမှာ download ပြုလုပ်ထားတဲ့apps တွေနဲ့ မှားယွင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
Telenor App Store မှ apps များ download ပြုလုပ်ရန် အင်တာနက်လိုအပ်ပါသလား?
Download ပြုလုပ်မှုတိုင်းအတွက် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ပါတယ်။
Telenor App Store မှ apps များ အသုံးပြုရန် အင်တာနက်လိုအပ်ပါသလား?
လိိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် offline usage အနေနှင့် application များကို ၅ ခါ အထိ ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်ရန် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
Telenor App Store ၀န်ဆောင်မှုအား IOS နှင့် Android နှစ်မျိုးလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
Android ဖုန်းအမျိုးအစားတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Telenor App Store Service အား ဘယ်လို subscribe ပြုလုပ်ရမလဲ?
https://appstore.telenor.com.mm သို့ Android ဖုန်းဖြင့်ဝင်ရန် App တစ်ခုခုအားနှိပ်ပါ။ (သို့) အကောင့် သို့သွားပါ။ 'စတင်မည်' ကိုနှိပ်ပါ။ Double Confirmation Page သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ‘ရယူပါ’ ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် 'အခုပဲဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်ပါ' အားနှိပ်ပါ။ ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်မှုအောင်မြင်ကြောင်း SMS ရရှိပါလိမ့်မည်။
အပ်ပလီကေးရှင်းများ အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ရန် အတွက် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါသလား။
အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်အား နေ့စဉ် ပမာဏကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ် Telenor Myanmar မှ သတ်မှတ်ထားသော ဒေတာသုံးစွဲမှု ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပါက သင့်(Customer) ၏ ဖုန်းဘေလ်/ ဒေတာ plan ထဲမှ ဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုအား ဘယ်လိုပယ်ဖျက်နိုင်သလဲ ?
ဝက်ဘ်ဆိုက် ထဲမှ ‘My Account’ နေရာကိုဝင်ပြီး ‘Unsubscribe’ ခုလုတ်ကိုနိုပ်ခြင်းဖြင့် (သို့) Appsclub မှပို့သည့် မတ်ဆေ့ များမှ unsubscribe link သို့ ဝင်ကာ ‘Yes’ ခုလုတ်ကိုနိုပ်ခြင်းဖြင့် (သို့) 75457 သို့ OFF ဟု SMS ပေးပို့ ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။